एसईओ मा क्यानोनिकल को प्रभाव - Semalt बाट संकेत
निस्सन्देह, तपाईंले शब्दमा दोस्रो नजर राख्नुपर्‍यो। हामीले यो स्वीकार्नु पर्छ कि यो अलि अनौंठो लाग्छ, हैन र? ठिक छ, हामी यसलाई SEO र Google वरिपरिको भन्छौं। क्यानोनियलाइजेशन केवल तपाइँको वेबसाइटको लागि सबैभन्दा उपयुक्त वा सबै भन्दा राम्रो यूआरएल लिने प्रक्रिया हो जब तपाइँ धेरै विकल्पहरूको लागि खुला हुनुहुन्छ, र यो सामान्यतया। सामान्यतया, on anonicalization होम पृष्ठहरूमा सन्दर्भ गर्दछ।
उदाहरण को लागी, यहाँ केहि उदाहरणहरु छन् जुन धेरै व्यक्तिले उस्तै वस्तुको अर्थ बुझ्नेछन्:
जे होस्, यस लेखले तपाइँलाई देखाउँदछ कि यी वेबसाइटहरू वास्तवमै कसरी भिन्न छन्। एक वेब सर्भर माथिको URL को प्रत्येक को लागी बिभिन्न सामग्री खोल्न सक्छ। यदि तपाईं गुगलमा "क्यानोनियलाइज" URL हुनुहुन्छ भने, तपाईले यूआरएल छान्ने प्रयास गर्नु हुने छ जुन त्यो सेटबाट सब भन्दा राम्रो प्रतिनिधि देखिन्छ।
Semalt मा हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई क्यानोनियसन, र क्यानोनिकल ट्याग भन्ने शब्द भेट्टाएका छन र तिनीहरू अलमल्लमा परेका छन् किनकि यो त्यस्तो चीज होइन जुन तपाईले एसईओको अन्वेषण गर्दा सामान्यतया हेर्नुहुन्छ। जे होस्, Semalt को SEO को आसपास यसको मार्ग थाहा छ। हामी यो अवधारणा बुझ्दछौं, त्यसैले किन हामीले हाम्रो लेखहरूलाई क्यानोनिजेशनको बारेमा हुन सक्ने र केहि तपाइँको एसईओ रणनीति को अर्थ के हो केहि प्रश्नहरु लाई उत्तर दिन मद्दत गर्न यो लेख डिजाईन गरीएको छ। यस लेखको अन्त्यमा, तपाईंसँग यस्ता प्रश्नहरूको उत्तरहरू हुनेछ:
क्यानोनिकल ट्यागहरू के हुन्?
र क्यानोनिकल ट्यागहरू कहिले प्रयोग गर्ने?
क्यानोनिकल ट्यागहरूले वेबसाइटको एसईओ प्रयासहरूलाई असर गर्न सक्दछ?
निस्सन्देह, यो एकैचोटमा लिनको लागि धेरै हुन सक्छ, तर हामी यसलाई सरल राख्दछौं र तपाईंलाई क्यानोनाइजेशनको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा प्रदान गर्ने आशा गर्दछौं।
क्यानोनिकल ट्यागहरू र उनीहरू कसरी SEO लाई प्रभाव पार्छन्
यसको द्रुत उत्तर यो हुनेछ कि क्यानोनिकल ट्यागहरूले एसईओलाई दुई दृष्टिकोणबाट प्रभावित गर्दछ। पहिलो यो हो कि उनीहरूले प्रत्यक्ष परिणामहरू कसरी खोज परिणामहरू प्रदर्शन हुन्छन्। दोस्रो, तिनीहरू वेबसाइटको समग्र श्रेणीकरण SERP मा प्रभावित गर्दछ धेरै कारकहरूको परिणामको रूपमा यसको संरचना, प्रयोगकर्ता अनुभव, र PageRank प्रवाह।
यो जान्न, जे होस्, तपाईंलाई क्यानोनिकल ट्याग विज्ञ बनाउँदैन। त्यहाँ अझ धेरै कुरा तपाईंले जान्नु आवश्यक छ।
यदि तपाईंले यस विन्दूमा आफ्नै प्रयास गर्नुभएमा, तपाईं राम्रो भन्दा अधिक हानि गराउन बाध्य हुनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै चीजहरू गलत हुन सक्छन, त्यसैले यो उत्तम छ कि तपाईले Semalt मा हाम्रो टीम जस्ता पेशेवरहरू प्राप्त गर्न आफ्नो वेबसाइटलाई क्यानोनाइजेशनको फाइदा लिन मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ।
क्यानोनिकल ट्यागहरू किन अस्तित्वमा छन्?
प्रारम्भिक चरणमा, क्यानोनिकल ट्यागहरू मुद्दाहरूको समाधान गर्न सिर्जना गरिएको थियो जुन नक्कल सामग्रीको परिणाम स्वरूप आउँदछ। यसलाई थोरै भ break्ग गरौं, हैन! यदि तपाईंसँग तीन पृष्ठहरू छन् जुन सटीक प्रतिकृति वा कम्तिमा एकदम मिल्दोजुल्दो छ भने, तपाईं आफ्नो मनपर्ने SERP मा देखाउन छान्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले तपाईले खोज ईन्जिनलाई थाहा पाउनुहुन्छ कि कुन वेब पृष्ठ उनीहरूले पहिले भ्रमण गर्नुपर्दछ र उनीहरूको खोज परिणामहरूमा देखाउनुपर्दछ।
यो याद गर्न सुरक्षित छ कि क्यानोनिकल ट्यागको प्रयोगको बारेमा धेरै गलत धारणा छन्, र हामी तपाईंलाई यसलाई मेटाउन मद्दत गर्दछौं।
यस बिन्दुमा हामीले बुझ्नुपर्दछ कि गुगलले कसरी नक्कली सामग्रीहरूको व्यवहार गर्दछ। जे होस् Google ले डुप्लिकेट सामग्रीको कदर गर्दैन, त्यहाँ वास्तवमा कुनै पेनाल्टी छैन यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट मा डुप्लिकेट सामग्री छ। जे होस्, त्यहाँ नक्कल गरिएको सामग्रीको नकारात्मक पक्ष छ किनकि गुगलले राम्रो-संरचित साइटहरू क्रमबद्ध गर्न रुचाउँछ कि त्यस्ता गल्तीहरूलाई बेवास्ता गर्दछ।
केही समय पहिले, हामीले तपाईंको SEO श्रेणीकरणमा नक्कल गरिएको सामग्रीको प्रभावमा लेख्यौं।
SEO मा नक्कल सामग्री को प्रभाव
वेबसाइटहरू वर्गीकरण गर्नु ईन्जिनको लागि कुनै सजिलो काम छैन। इन्टरनेट मा अरबौं वेबपेज विचार गर्नुहोस्। आदर्श रूपमा, वेबसाइटहरू र वेब पृष्ठहरू सबै अद्वितीय हुनुपर्दछ, र प्रत्येक पृष्ठको आफ्नै आफ्नै मूल सामग्री हुनु पर्छ। यद्यपि नक्कली सामग्रीहरू धेरै सामान्य छन्। धेरै वर्षको लागि एक वेबसाइट अद्यावधिक पछि, तपाइँको वेबसाइटमा उस्तै पोष्टहरू याद गर्न सजिलो छ। यो हामी "सामग्री को रूपमा सन्दर्भ छ नरभक्षीकरण"
त्यसो भए, कल्पना गर्नुहोस् कि गुगल तपाईंको वेबसाइट मार्फत क्रल गर्दछ, र यसले चार पृष्ठहरू उही खोजशब्दहरू वा सामग्रीको लागि क्रमबद्ध गर्न खोज्दछ। अब तपाईले गुगललाई गाह्रो बनाउनुभएको छ किनकि अरबौं बिभिन्न वेबसाईटहरूको बीचमा लिइएको यसको कार्यको अतिरिक्त, तपाईले गुगललाई उही वेबसाईटमा डुप्लिकेट गरिएको पृष्ठहरू मध्ये छनौट गर्न बाध्य गर्नुभयो। यो केवल Google मा वर्कलोड डबल्स गर्दछ जब तपाईको वेबपेजलाई क्रमबद्ध गर्न को लागी।
उच्च डोमेन प्राधिकरणको साथ, तपाईं भाग्यशाली हुन सक्नुहुन्छ दुई वा सबै चार वेबसाइट रैंक। यद्यपि यो ज्ञात तथ्य हो कि गुगलले विविध डोमेनलाई एकै पटकमा समान सामग्रीमा वर्गीकरण नगर्न सबै भन्दा राम्रो कोशिस गर्दछ। यी समान पृष्ठहरूमा बहु स्तर निर्धारण को मामला मा Google को नमिल्दा परिणामहरूमा देखाइन्छ।
क्यानोनिकल ट्याग प्रयोग गरेर, तपाईले गुगलको कामलाई आफ्नो वेब पृष्ठहरु लाई क्रमबद्ध गर्न सजिलो बनाउनुहुन्छ किनकि तपाईले देखाउँनु हुन्छ कि कुन वेबपेज तिनीहरुलाई दर्जा दिनुहोस्। त्यस्ता कार्यहरूले तपाईंको वेबपृष्ठहरूलाई गुगलको साथ समर्थन लिन मद्दत गर्दछ। यो फाउन्डेसन बनाउँछ जहाँ क्यानोनिकल ट्यागहरूले SEO लाई असर गर्दछ।
क्यानोनिकल ट्यागले SEOलाई कसरी असर गर्छ?
हामी नक्कल सामग्री मुद्दाहरूको समाधान गर्न क्यानोनिकल ट्यागहरू प्रयोग गर्छौं र खोजी ईन्जिनहरूले हाम्रो पृष्ठहरूलाई राम्रोसँग र्याक गर्न मद्दत गर्दछ, यो स्पष्ट छ कि यसले वेबसाइटको एसईओ रणनीतिलाई मद्दत गर्दछ। हामीले माथि उल्लेख गरेझैं क्यानोनिकल ट्यागहरूले एसईओलाई दुई प्राथमिक तरीकामा असर गर्दछ:
यो खोज परिणाम प्रदर्शन प्रभाव
यी ट्यागहरू प्रयोग गरेर, तपाईं खोज ईन्जिनहरूलाई निर्देश दिनुहुन्छ केही पृष्ठहरू भन्दा अरूलाई देखाउन। त्यसोभए जब पृष्ठ B समान कुञ्जी शब्दमा दर्ता हुन्छ, तपाईं गुगललाई पृष्ठ A सँग सट्टामा जान निर्देशन दिनुहुन्छ।
क्यानोनिकल ट्यागहरूले तपाईंलाई पृष्ठहरूको संकुचित समूहमा फोकस गर्न दिन्छ
यो महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईंले खोजी ईन्जिनलाई लक्षित गर्ने र उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्ने आशा गर्नुहुन्छ।
उदाहरण को लागी, तपाइँको वेबसाइट मा, तपाइँसँग दुई उप-पृष्ठहरु संग एक मूल्य निर्धारण पृष्ठ हुन सक्छ, र यी उप-पृष्ठहरु समान कुञ्जी शब्दहरु को लागी प्रतिस्पर्धा मा एक अर्को मा cannibalizing हुन सक्छ। जब तपाईं यी दुई पृष्ठहरू मर्ज गर्न चाहनुहुन्न, तपाईं cannibalization रद्द गर्न सक्नुहुन्छ "क्यानोनिकल" ट्यागको साथ। त्यस्ता ट्यागहरूको साथ, प्रयोगकर्ताहरू सँधै मुख्य मूल्य निर्धारण पृष्ठमा अवस्थित हुन्छन् जब उनीहरू खोज ईन्जिनहरू प्रयोग गर्छन्, तर तिनीहरूले साइटमा हुँदा अन्य पृष्ठहरूमा पनि पैतृक गर्न सक्छन्।
क्यानोनिकल ट्याग बनाम। 1०१ पुनर्निर्देशित
के तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ के rel=क्यानिकल र 1०१ पुन: निर्देशितको बीचमा भिन्नता छ?
ठीक छ, जब तपाइँ 1०१ प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँ Google लाई सूचित गर्नुहुन्छ कि वेब पृष्ठ अब अवस्थित छैन। गुगलले त्यसपछि यसको सामग्री बेवास्ता गर्दछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई निर्देशन दिन्छ कि त्यो पृष्ठ बन्द गरिएको छ।
क्यानोनिकल ट्यागहरू प्रयोग गर्दा तपाई गुगललाई भन्नुहोला, "हे साथी, यो नक्कल बाहिर जान्छ यसैले यसको सट्टामा तपाईले मेरो मनपर्दो संस्करण प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ"।
त्यसैले क्यानोनिकल ट्यागहरूले तपाईंलाई तपाईंको आगन्तुकलाई मनपर्दो पृष्ठमा लैजान अनुमति दिन्छ जबकि 1०१ रिडाइरेक्ट्सले गर्दैन। यसको सट्टामा, 1०१ पुनःनिर्देशनहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गर्दछ कि त्यस्ता पृष्ठ अब अवस्थित छैन।
म कहिले यी ट्यागहरू प्रयोग गर्न सक्छु?
यदि तपाईं वेबपृष्ठ बन्द गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं 1०१ विकल्पको लागि जान सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, यदि दुबै वेबपृष्ठहरू समान छन् तर समान रूपले सान्दर्भिक जानकारी समावेश गर्दछ, तर तपाईंसँग रुचाइएको संस्करण छ, तब तपाईं क्यानोनिकल ट्याग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
केनोनिकल ट्यागहरूले लिंक जुस पास गर्न सक्छन्?
यस प्रश्नको छोटो उत्तर हो हो, तर यस उत्तरका लागि बढि विवरणहरू छन्। तिनीहरूको आधिकारिक पृष्ठमा, गुगलले उल्लेख गरेको छ कि क्यानोनिकल ट्यागहरूले रस लिंकहरू पार गर्न मद्दत गर्दछ।
क्यानोनिकल ट्याग कसरी थप्ने
क्यानोनिकल ट्यागहरू HTML मा सजिलैसँग थप्न सकिन्छ। यद्यपि यो प्रबन्धन गर्न र संघर्षबाट जोगिने बित्तिकै कठिन हुन्छ। जब यी ट्यागहरू गाउँछन्, यो बुद्धिमानी हुन्छ कि तपाइँ विभिन्न प्रकारका पृष्ठहरूमा विभिन्न प्रमाणिक सम्बन्धहरू प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ। यी ट्यागहरूको प्रयोग एक नाजुक प्रक्रिया हो, र यसमा कुनै सर्टकटहरू छैनन्। यसलाई सहि बनाउनका लागि तपाईलाई पेशेवरहरूको सेवाहरू आवश्यक पर्दछ Semalt, जोसँग तपाइँको क्यानोनिकल ट्यागहरू तपाइँले चाहानुहुन्छ ताकि कार्य गर्न प्राप्त गर्न वर्षौं प्रशिक्षण र प्रोग्रामिंग अनुभव छ।
उदाहरण को लागी, तपाई आन्तरिक खोज URL लाई निर्देशन दिन चाहानु सक्नुहुन्छ:
Semalt.com/search/?color=red लाई Semalt.com/red-pr Prodct
पनि औंल्याउँदा Semalt.com/search/?color= ब्लू लाई Semalt.com/yellow- Prod Prodct।
यो त्यस्तो चीज होइन जुन सजीलै प्राप्त गर्न सकिन्छ, किनकि प्राय प्लेटफर्महरू खोज पृष्ठहरू गतिशील रूपमा उत्पन्न गर्दछन्। त्यसो गरेर, तपाईंले आफ्नो ट्यागहरू थप्न प्रयास गर्दा पनि तपाईंको कोडमा पहुँच सीमित गर्दछ।
क्यानोनिकल ट्यागहरू प्रयोग गर्न एक विकल्प गुगलको खोजी कन्सोल यूआरएल प्यारामिटर उपकरण प्रयोग गर्नु हो। यस उपकरणको साथ तपाई विशिष्ट URL प्यारामिटरहरू हाइलाइट गर्न सक्नुहुनेछ तपाई खोजीबाट हटाउन चाहानुहुन्छ। यो प्रयोग गर्दा, तपाईं पनि सावधान हुनुपर्छ किनकि गलत सेटिंग महँगो हुन सक्छ। यो विकल्प ठूला वेबसाइटहरू र धेरै प्यारामिटरहरूको साथ समय र पैसा बचत गर्न ग्राहकहरूको लागि रुचाइएको छ।
सीधा HTML मार्फत
क्यानोनिकल ट्यागहरू थप्नको लागि अर्को सरल तरिका सीधा HTML मार्फत त्यसो गर्नु हो। यो ट्याग प्रयोग गर्न मेटा मेटा ट्याग जस्तै छ। यो यस्तो देखिनु पर्छ:
<लिंक rel="क्यानोनिकल" href="https://Semalt.com/article/19204/canonical-urls-seo/" />
विचार गर्नुहोस् कि त्यहाँ एक पृष्ठ A छ र यो पृष्ठ बीको नक्कल हो। यस्तो अवस्थामा पृष्ठ A ले एक href एट्रिब्यूटको साथ क्यानोनिकल ट्याग लिनुपर्दछ जुन पृष्ठ बीमा URL समावेश गर्दछ। यो कार्यले खोज ईन्जिनलाई बताउँदछ कि तपाईं तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ। अनुक्रमणिका र पृष्ठ B भन्दा पृष्ठ B लाई।
संग Semalt, तपाइँ क्यानोनिकल ट्यागहरू तपाइँको वेबसाइटमा थपिएको छ र यसका सबै सुविधाहरूको आनन्द लिनुहोस्। पेशेवरको रूपमा, हाम्रो स्टाफ राम्रोसँग सिकेका छन् र तपाइँले के चाहानुहुन्छ सुन्नुहोस्। त्यहाँबाट उनीहरूले तपाईंसँग सम्झौता नभएसम्म छलफल गर्नेछन्। त्यसोभए, तिनीहरू कार्यमा वसन्त हुन्छन् र कुनै समय बिना, तपाईंसँग उत्तम वेबसाइट छ।
आज हामीलाई कल दिनुहोस्।